FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLBOXER PIT DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullboxer Pit Dog
Alika mpiady totohondry / mpiady totohondry amerikanina
Ity no Leo the Bullboxer Pit amin'ny 4 taona. Ny dadany dia Pit Bull ary ny reniny no Boxer. Leo no fako tamin'ny fako. Leo toa mifangaro Spencer the Pit Bull miaraka amin'i Bruno the Boxer , iza izy roa alika lahy neutered , fa ny resaka hypothotika. :)
Ny alika Bullboxer dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny American Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazan-kazo mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Bulletin amerikana
Mpanoratra International Canine Registry®= Bullboxer
'Ity i Jaxson amin'ny herintaona mahery. Ny dadany dia a brindle purebred Boxer ary ny reniny dia Pit Bull . Nandray ny toetran'ny reniny izy tamin'ny ankamaroany. Izy dia alika mahafinaritra , ary tsara miaraka ankizy . '
'Raj sy Danielle dia tompona ireharehan'ny an'i Marco, fifangaroan'ny Pit / Boxer / zavatra hafa rehetra. 11 volana izy (tsy ho ela dia 1) ary mankafy kilalao, hazokely, mandeha an-tongotra lavitra eny amoron-dranomasina (ara-bakiteny) ary manome fitiavana ny olon-drehetra. '
Pharoah the Bullboxer Pit amin'ny 1 1/2 taona— 'Tian'i Pharoah ny rano. Somary saro-kenatra izy tamin'ny voalohany, fa rehefa nahafantatra ahy izy dia tonga. Manana tsy fankasitrahana lehibe izy alika hafa hatramin'ny nanafihana azy tamin'ny fahazazany, nefa alika tsara izy manodidina. '
heeler manga sy collie sisintany
Riley the Bullboxer Pit amin'ny 2 taona
Daisy Duke, lavaka famonoana omby 2 taona— 'Ny reniny dia mpanao ady totohondry ary ny rainy dia an American Pit Bull Terrier . '
Kabo ilay Pitaka Bullboxer fotsy madio amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana ao aorian'ny kamio mena-mena— 'Ny dadan'i Kabo dia Boxer ary ny reniny dia Pit Bull. Izy dia tovolahy kely mazoto izay manimba hatrany ny reniny mba hilalao aminy. Tiany ny fitsaboana azy ary manomboka mianatra haingana dia haingana ny baiko fototra. Rehefa tapitra ny andro ary tonga ny fotoana hiantsoana azy io ho alina dia izy no voalohany nifampiraharaha taminao ary tsy nanonofy izy (mety hanenjika ny reniny manodidina ny tokontany) afaka minitra vitsy. Mpanampy tsara ho an'ny fianakaviana izy, ary tsy toy ny ray aman-dreniny fony izy ireo nitovy taona taminy ary nahafinaritra azy ny tsy mitsako zavatra hafa ankoatry ny kilalao kilalao. Very satroka iray monja tamin'ny fitsakoany playfull, izay tsara lavitra noho ny kiraro, tady, satroka maro hafa izay nopotehin'ny ray aman-dreniny tamin'ny faha-4 taonany. Manantena ny hijerena azy ho lehibe aho ary hanjary ilay zavatra azoko antoka fa ho alika malaza sy tsara tarehy indrindra eto an-tsena. '
Kabo ilay Bullboxer Pit lava fotsy sy miloko mavokely amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana
Kabo ilay Pitaka Bullboxer fotsy madio amin'ny maha alika kely azy amin'ny 4 volana matory
Destiny ny lavaka Bullboxer rehefa olon-dehibe— 'Destiny dia fifangaroan'ny Pit Bull / Boxer. Alika mahafinaritra izy. Tena be fitiavana izy ary manana toetra Pit Bull bebe kokoa noho ny Boxer. Manana ny molotra Boxer sy valanorano ambany izy izay mipoitra somary lavitra noho ny any ambony. '
Destiny ny Bullboxer Pit mbola tsy nihalehibe
Destiny ny Bullboxer Pit ho alika kely
Destiny ny Bullboxer Pit toy ny alika kely mandry amin'ny ahitra.
Kismet the Bullboxer Pit amin'ny taona 1 sy 7 volana vonona hilalao— 'Kismet (Kiz) dia nomen'ny olon-tsy fantatra ahy fony izy vao herinandro vitsivitsy. Izy no alika be fitiavana hitako indrindra! Tiany ny manoroka sy ivon'ny fiheverana. Tiany ny zazakely sy ny biby hafa (na ny kisoa biby fiompy vonjimaika aza) tiany ny manenjika afomanga sy mikitrika ambony sandriko hatory. Izy dia zazakely goavambe izay mitondra tsikitsiky amin'izay olona mifanena aminy. '
Sam the Bullboxer Pit (Pit Bull / Boxer mix dog dog)
Rocket the Bullboxer Pit (American Pit Bull / Boxer mix) amin'ny 2 taona— 'Alika mahery vaika sy mahery fihetsika izy. Haingam-pandeha izy, ka izany no anarany. Rocket dia mianatra haingana. Nahafantatra tetika maro izy, anisan'izany ny dimy avo, mihozongozona, mipetraka ary matory amin'ny vao 4 volana monja. Tia mianatra i Rocket! Tiany Meaty Bones. Alika be fitiavana toy ny Boxer izy nefa matanjaka sy hozatra toy ny Amerikanina Pit Bull. Nanavotra an'i Rocket tamin'ny olona nanome sakafo hena azy aho ary nandaka azy tamin'izy vao iray volana teo ho eo. Izy no alika tsara indrindra nananako. '
Rocket the Bullboxer Pit (American Pit Bull / Boxer mix) alika kely amin'ny 5 volana
'Ity i Walter Mellin (mahazo?) Ao anatin'ny telo volana. Ny reniny dia Pit Bull ary ny rainy dia Boxer. Tena mamy izy ary matory be. Mpihanika tendrombohitra izy! Tena marani-tsaina koa izy. Efa fantany ny mipetraka, mijanona, mandry, tongava eto, ny anarany, manondraka vilany, ary koa karazana teny maro hafa izay manondro ny halehany (vata, efitrano fandriana, ivelany). Malemy fanahy tokoa izy ka afaka manafika balaonina milalao mandritra ny 35 minitra alohan'ny hamonoana azy ... amin'ny hohony fa tsy amin'ny nifiny! Tia azy ny olon-drehetra ary manova ny fihetsiky ny tsirairay momba ny alika Pit Bull (na Pit Bull mifangaro). '
Fito izao, ny reniny dia Amerikanina Pit Bull Terrier ary ny rainy dia Boxer. Fito dia mbola alika kely amin'ity sary ity.
'Nalaina ireo sary ireo rehefa feno valo volana i Seven. Sahabo ho 22 kilao izy. Tokony hahatratra hatrany amin'ny 60-70 kilao (27-32 kg) eo ho eo izy, izay mety tsy ho tratra raha tsy roa taona eo ho eo! Raha mijery ity sary ity ianao dia hahita ny Pit Bull sy ny Boxer, tena asehony ao aminy ilay Boxer rehefa mientam-po izy ary manetsiketsika ny rambony. Manetsika ny tendrony farany io dia mahatsikaiky tokoa! Izy koa dia mitovy amin'ny Boxer miaraka amin'ny alika hafa fa tsy dia mahery setra mihitsy izy, fa izy kosa dia malemy paika kokoa noho ny Boxer na ny ankamaroan'ny Pit Bulls. Tena mahatalanjona izy! Sary natolotry ny World New Am. Bull Boxer Kennel '
alika mpiandry ondry alika omby aostralianina
Afangaroy ny mix Bull Pit / Boxer amin'ny 6 volana
'Dog tsy mahalala fomba io, matetika antsointsika hoe Roo. Hitanay teo amin'ny taranja golf izy efa ho herintaona lasa izay ary nanomboka teo dia nitombo 7 kilao tena saro-kenatra sy saro-kenatra ho 70-lb mahery izy amboa lap '(na araka ny eritreriny!) Tombananay ho eo amin'ny herintaona eo ho eo izy. Ny zavatra tena ankafiziny eto amin'izao tontolo izao dia ny fitsaboana doggy ary ny fividianana a mandeha isan-kariva , indrindra amin'ny lanezy. Tena tsara fitondran-tena izy ary tena mamaly olona vaovao sy alika hafa mihaona aminy te ho sakaiza REHETRA !! Fantany ny azy fitsipika sy fetra fa indraindray indray miposaka izy ary mety mitsako tariby na manimba ny lamba firakofany, fa, hey, raha tsy mahasosotra anao izy dia tsy afaka manome anao ny mason'alika alika mahafatifaty azy! Eto izy eo am-pandriany miandry fitsaboana, naharitra 15 minitra farafaharatsiny mba hahazoana sary mendrika. '
saint bernard ary mifangaro dane be
Sarge zanak'alika Bullboxer Pit 13 herinandro - hoy ny tompony, 'Sarge dia te-hiondrika… noho izany ny anarana hoe Sarge… manenjika baiko izy rehefa misy zavatra tadiaviny.'
Tango the Bullboxer Pit amin'ny faha-7 taonany sy eo amin'ny 73 pounds - hoy ny tompony, 'Heveriko fa ity sary ity dia mampiseho ny toetra miavaka ananan'ny Bullboxers matetika, eo anelanelan'ny sakan'ny Pit Bull na Bulldog sy ny zoro ary ny tongotra lava kokoa an'ny Boxer. Ny Bulloxer rehetra hitako dia mampiseho ireo toetra ireo (na dia vitsy monja aza no fantatro). '
Leo the Bullboxer Pit amin'ny faha-4 taonany
sary mifangaro heach dachshund manga
boston terrier mifangaro amin'ny beagle
mixer spaniel miaraka amin'ny pomeranian
sarin'ny mixer pitbull boxer
alika lehibe mandohalika